Tondra-drano Tany Sri Lanka: Manampy ny Tra-boina Ireo Vavolombelona
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Chichewa Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Haoussa Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Yorobà
Nanampy An’ireo Tra-boina Tamin’ilay Tondra-drano Tany Sri Lanka ny Vavolombelon’i Jehovah
Vavolombelona mampiditra entana ao anaty fiara, mba hozaraina amin’ireo tra-boina
COLOMBO, any Sri Lanka—Any amin’ny 100 kilaometatra eo ho eo miala eo Colombo, renivohitr’i Sri Lanka, no misy an’i Aranayaka. Nisy tany nihotsaka be dia be tany, ka olona 100 mahery no maty, ary 350 000 teo ho eo no tra-boina. Nisy oram-be nivatravatra tany nanomboka tamin’ny 15 Mey, ka nahatratra 373 milimetatra ny rotsakorana tany Kilinochchi, tao anatin’ny indray andro. Milaza ny manam-pahefana fa iny no loza voajanahary ratsy indrindra namely an’i Sri Lanka, taorian’ilay tsunami tamin’ny 2004.
Nilaza ny biraon’ny sampan’i Vavolombelon’i Jehovah any Sri Lanka fa tsy nisy Vavolombelona namoy ny ainy, saingy 200 teo ho eo no tsy maintsy nafindra toerana. Tondraky ny rano ny Efitrano Fanjakana, izany hoe ny efitrano fivorian’izy ireo, any Kaduwela. Any amin’ny 15 kilaometatra eo ho eo miala avy any Colombo no misy azy io. Nahatratra roa metatra ny haavon’ny rano tao amin’ilay izy.
Mpiasa an-tsitrapo ao amin’ny Efitrano Fanjakana any Kotahena, mitsinjara an’ireo fanampiana homena ny tra-boina, ohatra hoe rano, sakafo, akanjo, ary fanafody
Nanangana komitin’ny vonjy rano vaky avy hatrany ireo Vavolombelona mba hikarakarana an’izay nilain’ireo tra-boina sy hampaherezana azy ireo avy ao amin’ny Baiboly. Napetraka tao amin’ny Efitrano Fanjakana tao Kotahena ny fanampiana an’ireo tra-boina, ohatra hoe rano madio sy akanjo ary fanafody. Vavolombelona an-jatony no nanolo-tena hizara an’izay nilain’ireo mpiara-mivavaka aminy sy ny mpiray tanàna aminy.
Hoy i Nidhu David, mpitondra tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah any Sri Lanka: “Mbola mivavaka ho an’ireo fianakaviana maro tra-boina tamin’iny loza iny izahay. Manampy an-dry zareo manadio ny tranony koa izahay, mizara sakafo, ary manome akanjo ho an’izay mila an’izany. Mahafinaritra be mihitsy ny toe-tsain’ireo Vavolombelona nanolo-tena mba hanampy, tamin’iny loza iny. Tena nampahery ny zavatra nataon-dry zareo, nandritra an’ireny fotoan-tsarotra ireny.”
Maneran-tany: David Semonian, Biraon’ny Filazam-baovao, tel.: 1 718 560 5000
Sri Lanka: Nidhu David, tel.: 94 11 2930 444